Kitapo may afo, vokatra fiarovana amin'ny afo, lambam-paty afo - Weicheng
Tongasoa eto WEICHENG
Amin'ny alàlan'ny fanamarinana rafitra fitantanana kalitao ISO9001: 2000, ny rafitra kalitao henjana dia miantoka ny kalitao avo lenta sy ny fahamendrehana avoakan'ny vokatra.
Ny firafitra vy sy trano matevina anaty trano sy any ivelany dia ny firakotra, ny akanjo vita amin'ny afo tariby ary ny vokatra mitarika hafa dia manana laza malaza any Shina.
Miorina amin'ny fahatsorana
Amin'ny famolavolana ny vokatra, ny famokarana ary ny varotra, ny orinasa dia manaraka hatrany ny filozofia momba ny "fahamarinana mifototra amin'ny fahamarinana sy ny fahamarinana"
Misy karazany 22 amin'ny andiam-bokin'ny orinasa 5.
Ny fanaingoana ny vokatra sy ny fonosana dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny mpanjifanay.
Weicheng Fire Prevention Technology Group Co., Ltd. dia orinasa simika iray mandray anjara amin'ny famolavolana sy famokarana fitaovana miady amin'ny afo sy ireo fitaovana tsy mahazaka afo
1. Inona no tsy maintsy dinihina rehefa mividy fitaovana plugging plastika malemy paika amin'ny Internet? Ahoana ny fomba hanaovana safidy tsara? Ny fividianana Internet amin'ny alàlan'ny fitaovana plugika miovaova dia midika fa novidina ny vokatra ...
Ahoana ny fomba hisafidianana plugging biolojika azo ovaina ...
Amin'ny maha karazana fitaovana plugging vaovao azy ireo, ny maodelin'ny afo-retardant dia nibodo haingana ny haavon'ny fitaovana plugging ary nanjary ankafiziny hafa teo amin'ny tsenan'ny fananganana. Ny fahaterahan'ny mpamono afo ...
Modely fisorohana afo Wei Cheng hanao azo antoka ...
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny fanjakana dia nandinika bebe kokoa ny fisorohana ny afo amin'ny tetik'asa fananganana trano, ary fitaovana maro fisorohana afo no napetraka tamin'ny fananganana injeniera. Db-A3-t ...
Fonosana maharitra «afo» fanitarana ...